Tutu ballet siketi, yakave yakanaka kwemazana emakore - Nhau - Fitdance ballet tutu fekitori.
Imba > Nhau > Nhau dzekambani > Tutu ballet siketi, yakave yakanaka kwemazana emakore
Tutu ballet siketi, yakave yakanaka kwemazana emakore
Musikana wese ane fungidziro yakanaka nezve siketi.Tutu siketi ye ballet jira rinogona kugutsa fungidziro dzese dzevasikana. Fluffy uye akareruka, musikana wese akapfeka yakanaka tutu siketi zvechokwadi achazvifungidzira kunge ingano mune yengano mumoyo make. Kune vamwe vanhu vashoma vane dhirezi tutu rokwe rakabatidza mumoyo yavo nezve ballet.
Iyo Renaissance uye Iyo Baroque - yakapfuma uye yakasvibirira maitiro
MuRenaissance Italy neFrance, tsika dzakaomarara uye dzemaoresa dzaive dzakakurumbira padare. Maitiro eiyo ballet koshitomu zvakasarudzika akateedzera mafashoni maitiro emhuri yehumambo. Lace uye zvitsitsinho zvaive typicalelements yeiyo ballet nhanho yenguva iyoyo. Pakazosvika zana ramakore rechi17, silika, brocade, uye micheka yaive zvinhu zvakakosha zvehembe, iyo yaive yakashongedzwa negoridhe nematombo anokosha.
Mapfekero evatambi vechikadzi aive achiri akanaka, uye maledancers akatanga kuwedzera zvekushongedza zvinomiririra hunhu hwavo kana hupfumi, senge chigero chekusona. Munguva ye18th-century France, iyo Rococostyle yaive yese hasha: ruffles, ribhoni uye tambo yakashongedzwa ballerinasdresses, nepo pink, pichisi, denga-bhuruu uye rakacheneruka girini zvaive zvese hasha.
Mushure meFrance Revolution, zvipfeko zvevarume zvakatanga kuchinja, zvakatanga kuita fashoni inochengetedza uye yakapusa neoclassical maitiro. Mukutanga kwezana ramakore rechi19, nekukwira kwemachira nemhizha, ballerinas akatanga kupfeka macorset, corollas, lapels, uye mhete uye zvishongo pachikuva.
Iyo Revolution ye ballet Fashoni - kuonekera kwerudo tutu
Italian ballerina Maria Taglioni ndiye wekutanga ballerina mupasi rose anodhonza pointe shangu uye anomutsiridza iro reBaroque rokwe. Muna 1832, akatamba zvigunwe zvake mumupendero we tulle waakange agadzirirwa nababa vake mukuita kweFairy, zvichitungamira kuchimiro mune zvipfeko zve ballet.Imwe dzidziso ndeyekuti baba vakauya nedhivhoni yekuvhara kusakwana kwemuviri wemwanasikana wavo. Chikamu chepamusoro cheketi i corset ine isina mutsipa, uye hurefu hwebhero-rakagadzirwa gauze siketi iri pakati pemhuru, izvo zvinoita kuti mutambi ataridzike akareruka uye achisimbisa kunakirwa kwekugadzirwa kwezvigunwe. Romantic ballet akaberekwa, uye gare gare maartist akagadzira akawanda echinyakare mabasa ayo achiri anozivikanwa padanho nhasi - Iyo Fairy, Giselle, Coperalia, zvichingodaro. Vatambi vanorumbidza, vanonamata zvisikwa, kazhinji mumabasa ekugadzira isingachinjiki uye isina hunyoro ngano, chipoko uye mimwe mifananidzo yekutamba, mafambiro ekutamba anoyevedza uye anoyevedza kuUnited States.Tulle siketi inogona kuratidza ingori yakajeka uye yakanaka.
TUTU inguva yekupfeka yeklassical ballet
Tsarist Russia pakutanga kwezana ramakore rechi19 aichengetedza zvakanyanya uye haana kugamuchira chipfeko chitsva. Asi hafu yezana ramakore gare gare, ballet yakanga yakura zvakanyanya muRussia, uye madhirezi etutu atinoona kwese kwese padanho remazuva ano akaonekwa muRussia panguva imwe chete.
Kuzivikanwa kweTUTU kwakatungamirwa nekusimudzika kwekutamba muRussia panguva iyoyo, nevatambi vaitendeukira kumasiketi aibvumidza makumbo avo kufamba zvakasununguka kuti vapedze yakaoma choreography. Marius Petipa, nyanzvi choreoologist yechinyakare ballet, akagadzira hunyanzvi hwengano ballet senge Kurara Runako (1890), Swan Lake (1895) naRamonda (1898), izvo zvakatungamira mukuzivikanwa kwezvipfeko zvekunyepedzera.
Zana ramakore rechi20 - Kusunungurwa kwakasarudzika kweunifomu ye ballet
Mukutanga kwezana ramakore rechi20, pasi pesimba reGreat Russian choreographer Michel Fokine, urefu hwemasiketi evatambi zvishoma nezvishoma hwakawedzera kusvika pamabvi. Iyo dhizaini inotarisirwa kujekesa mhuru uye zvigunwe kufamba, pamwe nemhedzisiro yespin,izvo zvinoda danho repamusoro rehunyanzvi hwepa stage. Mhiri kwegungwa, mutambi wemuAmerican Isadora Duncan, muvambi wemadhanzi emazuva ano, akashamisa vazhinji paakaita pachikuva nemusoro uye tsoka dzakashama. Pasi pesimba rake, vatambi vazhinji vakasiya macorsets avo asina kugadzikana ehembe dzakasununguka.
Mune maArabia Nights, akaitwa muna 1910, zvipfeko zvevatambi zvakatora zvisina kujairika dhizaini yekuMiddle East, yaive yakabatana zvakanyanya nekuchinja kwekufarira kupenda, dhizaini uye fashoni yakanangana neEast zvese.
Yemazuva Ano uye Yemazuva Ekupedzisira Ballet - Wakamboona Swan Lake yevarume?
Pakazosvika ma1930, ballet koshitomu dhizaini raive risingafungidzirwe nedzidziso dzechinyakare. Mune zvimwe zvigadzirwa zvemazuva ano, zvakaita saMateo Bourne's version ye swanLake, macytet echinyakare akaomeswa anotambwa nevatambi vane makumbo ane mvere vasina kupfeka chero mbiru zvachose.
Pakupera kwezana ramakore rechi20, zvigadzirwa zvemafashoni zvakacherekedza dhizaini inoenderana ne ballet. Vazhinji vagadziri vemafashoni vakatora ballet sekufemerwa uye vakagadzira zvipfeko zvakasiyana-siyana zveballet, vachiunza runako urwu kubva padariro kuenda kumugwagwa.
Yapfuura:Nhanganyaya kune ballet TUTU kuchengetedza uye kutakurika
Tevere:Kwakatangira tutu ballet